Musi waGumiguru 27 Apple ichazivisa zvabuda zvemari zvazvino | Ndinobva mac
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani ichangobva kuzivisa musi uyo Tim Cook achaburitsa iyo yazvino mhedzisiro yezvemari mhedzisiro kune vanoita mari. Aya ma data ari kuruzhinji, saka chero munhu anofarira anokwanisa zvakare kuwana iyi data. Zuva rakasarudzwa neApple Gumiguru 27, zuva iro Apple ichapa mhedzisiro yezvemari yekambani inoenderana nekota yechina yemari yegore, yechipiri yegore 2016. Inofanira kuyeukwa kuti makore emari eApple, nemamwe makambani mazhinji ehunyanzvi, anotanga musi waGumiguru. uye kwete iyo Ndira 1 yegore rega.
Musangano mutsva uyu nevatengesi uchave unonakidza sezvo uchizopa yekutanga data yekutengesa yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, iyo sekureva kwevamwe vaongorori iri kudzikira pane iya yeiyo iPhone 6s uye 6s Plus, iyo yakatangwa nekambani musika. gore rapfuura panguva ino. Uye zvakare, Apple yanga isingade kupa ruzivo pane huwandu hwezvigadzirwa zvakagadziriswa mukati mekutanga kwevhiki kuwanikwa, chimwe chinhu chataive tambojaira mumakore achangopfuura, uye icho chingave chikonzero chekuyedza kupa iyo iPhone 7 nguva yekuswedera padyo nekutengesa kweyaakatangira.
Mumusangano wekupedzisira, Apple yakawana mari inosvika zviuru mazana mana nemazana mashanu ezviuru zvemadhora, iine purofiti yemamirioni 42.500, panguva imwechete yegore rapfuura kambani yakawana mari yakazara yemamiriyoni makumi mana nematanhatu emadhora uye purofiti yemamiriyoni gumi nemazana manomwe. Vaongorori vatosvika kubhizinesi vachizivisa kutengesa kwavo uye mari yekufungidzira. Maererano nevazhinji vavo, Apple inogona kuburitsa muhomwe muhombe pakati pe45,5 uye 47,5 bhiriyoni emadhora ine mwero unofungidzirwa we38%. Sekureva kwevamwe vaongorori, kambani yeApple ichawana kusvika Gunyana 30 uye mushure mekuvhara gore remari 2016 purofiti yemadhora zviuru mazana mashanu nezvishanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Musi wa Gumiguru 27 Apple ichazivisa mhedzisiro yayo yemari mhedzisiro
Iyo Samsung Cherechedzo 7 yakatsiviwa zvakare inopa matambudziko